Medical Writings ဆေးပညာစာများ: SLE ထူးခြားတဲ့ရောဂါ
Mon, Dec 10, 2012 at 10:38 PM
My wife recently went to SSC (Yangon) and did medical check-up because she has suffered joint pain. We suspect some kind of Rheumatism (လေးဘက်နာ). The medical check-up result shows that it is SLE (Systemic lupus erythematosus). I am quite worried for her and I would like to re-check up again as I can’t believe that she has SLE. Even if she has, I would like to know more about her current medical status. I can provide you her medical reports from SSC (Yangon).
ဆရာ- SLE လူပွတ်ရောဂါ အကြောင်း ကျနော်တို့နိုင်ငံမှာ သိသူနည်းလွန်းပါတယ်။ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေထဲမှာတောင် မသိသူတွေ အတော်များများရှိပါတယ်။ ကျနော်တောင်မှ အဲဒီရောဂါနဲ့ တူမအကြီး ဆုံးသွားမှသိတာပါ။ ဗမာလို နာမည် တတ်ထားတာတောင်မှာ ရှိဟန်မတူပါ။ ဆရာအနေနဲ့ အဲဒီရောဂါအကြောင်း အများ သိအောင် ဆောင်းပါတပုဒ်လောက်လောက် ရေးပေးပါလို့ မေတ္တာရပါရစေ။
ဒီရောဂါကို SLE (Systemic Lupus Erythematosus) လို့ခေါ်တဲ့အပြင် Disseminated Lupus Erythematosus (DLE), Lupus Erythematosus, Discoid lupus, Lupus နာမည်တွေ အမျိုးမျိုးခေါ်တယ်။ ရောဂါဗေဒအရ Autoimmune connective tissue disease လို့ တိတိကျကျခေါ်တယ်။ Lupus (လူးပတ်စ်) ဆိုတာ လက်တင်ဘာသာနဲ့ ဝံပုလွေ ဖြစ်တယ်။ အရင်က ဝံပုလွေကိုက်လို့ ဖြစ်တာလို့ ထင်ခဲ့တယ်။ အနာက ပျောက်ရင် အတွင်းပိုင်းကအရင်မို့ အကောင်ကိုက်ထားသလိုနေတာမို့ ထင်ခဲ့ကြတာပါ။
နာတာရှည်ရောဂါ ဖြစ်တယ်။ ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့ ရောဂါပြီးစနစ် ကမောက်မဖြစ်တာပါ။ ဆရာဝန်တွေလဲ ဒီလောက်သာသိတယ်။ အရေပြား၊ အဆစ်၊ ဦးနှောက်၊ ကျောက်ကပ် နဲ့ တခြား အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတွေမှာ ဖြစ်နိုင်တယ်။ ကိုယ်နဲ့မသင့်တဲ့ ဆေးတွေကြောင့် ဖြစ်လာနိုင်တယ်။ အဲကြောင့်ဖြစ်ရင်တော့ မသင့်တဲ့ဆေးတွေရပ်ရင် ပြန်ကောင်းနိုင်ပါတယ်။
ရောဂါလက္ခဏာတွေက တယောက်နဲ့တယောက် မတူကြဘူး။ ပေါ်လိုက်-ပျောက်လိုက်နေတယ်။ အဆစ်နာကြတာ များတယ်။ ရောင်ပြီးနာနေမယ်။ လက်ကော်ဝတ်၊ လက်ချောင်းတွေနဲ့ ဒူးမှာဖြစ်တာ ပိုများတယ်။ အားယုတ်၊ ကိုယ်ပူ၊ နေမကောင်းဖြစ်၊ မအီမသာဖြစ်၊ ဆံပင်ကျွတ်၊ ပါးစပ်မှာ အနာတွေပေါက်၊ အရေပြား အနီစက်၊ အနီကွက်တွေဖြစ်မယ်။ ထူးခြားတာက မျက်နှာမှာ နှာခေါင်းရိုးကို ခွဖြစ်နေတာက လိပ်ပြာတောင်ပံဖြန့်ထားသလိုနေမယ်။ တက်စေ့တွေ ရောင်နိုင်တယ်။ ဦးနှောက်မှာဖြစ်ရင် ခေါင်းကိုက်၊ ထုံ၊ တက်၊ အမြင်အားနည်း၊ အမူအယာပြောင်းလဲ။ အစာလမ်းမှာဖြစ်ရင် အစာမကျေ၊ ပျို့၊ အန်။ နှလုံးဖြစ်ရင် ရင်ပတ်နာ၊ နှလုံးခုန်မမှန်။ အဆုပ်ဖြစ်ရင် ချောင်းဆိုး၊ အသက်ရှူခက်။
American College of Rheumatology အမေရိကန် (ရူမတော်လော်ဂျီ) ကောလိပ်ကနေ ၁၉၈၂ ခုနှစ်မှာ ဒီရောဂါလို့ ပြောနိုင်တဲ့ Criteria သတ်မှတ်ချက်တွေ ထုတ်ခဲ့တယ်။ ၁၉၉၇ မှာမွန်းမံချက် ထုတ်တယ်။ ၁၁ ချက်ထဲက ၄ ချက်ရှိနေရင် SLE ဖြစ်တာ သေခြာတယ်။
1. Malar rash ပါးမှာ အနီကွက်ဖြစ်ခြင်း၊
2. Discoid rash အရေပြားမှာ နီမယ်၊ ကွာကျမယ်၊ အမာရွတ်ကျန်ရစ်မယ်။
3. Serositis (Pleurisy) အဆုပ်အဖုံးလွှာရောင်ခြင်း၊
4. Oral ulcers ပါးစပ်မှာ အနာပေါက်ခြင်း၊
5. Arthritis အဆစ် ၂ ခုမကနာခြင်း၊
6. Photosensitivity နေထဲက ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ကို မခံနိုင်ဖြစ်ခြင်း၊
7. Hemolytic anemia သွေးအားနည်းခြင်း၊ Leukopenia သွေးဖြူဥနည်းခြင်း၊
8. Renal disorder ကျောက်ကပ်ထိခိုက်ခြင်း၊
9. Antinuclear antibody test positive (အင်တီ-နူကလီယာ-အင်တီဘော်ဒီ) အပေါင်းပြခြင်း၊
10. Positive anti-Smith, anti-ds DNA, antiphospholipid antibody, and/or false positive serological test for syphilis စစ်ဆေးချက်တွေ အပေါင်းပြခြင်း၊
11. Seizures or psychosis တက်ခြင်း၊ စိတ်ရောဂါရခြင်း။
ရောဂါသေခြာအောင် မေးမြန်း၊ စစ်ဆေးတာတွေ လုပ်ပြီးနောက်မှာ Antinuclear antibody (ANA) (အင်တီ-နူကလီယာ-အင်တီဘော်ဒီ) စမ်းသပ်နည်းကို အရင်ဆုံး သုံးရမယ်။ anti-Sm (anti-Smith) နဲ့ သေခြာစေရတယ်။ dsDNA (double-stranded DNA) antibody စမ်းနည်းကလဲ အတော်အသင့် မှန်ကန်တယ်။ Anti-extractable nuclear antigen (anti-ENA) နည်းတွေလုပ်တယ်။ CBC သွေးစစ်၊ Chest x-ray ဓါတ်မှန်ရိုက်၊ Kidney biopsy ကျောက်ကပ်အသာစထုတ်စစ်တာ နဲ့ Urinalysis ဆီးစစ်တာတွေလဲ လုပ်သင့်တယ်။ Antithyroglobulin antibody, Antithyroid microsomal antibody, Complement components (C3 and C4), Coombs' test (direct), Cryoglobulins, ESR, Kidney function tests, Liver function tests, Rheumatoid factor စတာတွေကိုပါ လုပ်နိုင်သေးတယ်။
Complications နောက်ဆက်ဖြစ်နိုင်တာတွေကတော့ -
• Deep vein thrombosis အတွင်းသွေးကြောပိတ်တာ နဲ့ သွေးကြောရောင်ခြင်း၊
• Pericarditis, Endocarditis, Myocarditis နှလုံးမှာ အလွှာတွေရောင်တာခြင်း၊
• Miscarriage ကိုယ်ဝန်ပျက်ခြင်း၊
• Stroke ဦးနှောက်သွေးကြောပိတ်ခြင်း၊
• Anemia ၆ဝ% လောက်မှာ သွေးအားနည်းနေမယ်။ Thrombocytopenia သွေးမှုံနည်းခြင်း၊
• Pleuritis, Pleural effusion, Lupus pneumonitis, Chronic diffuse interstitial lung disease, Pulmonary hypertension, Pulmonary emboli, Pulmonary hemorrhage, Shrinking lung syndrome အဆုပ်ရောဂါတွေ ဝင်လာနိုင်တယ်။
• Painless hematuria ကျောက်ကပ်ဖြစ်ရင် ဆီးထဲသွေးပါနေမယ်၊ မနာဘူး။ Proteinuria ဆီးထဲ (ပရိုတင်း) အနည် ပါနေမယ်။ Lupus nephritis ကျောက်ကပ်ထိခိုက်ရာကနေ ၅% Kidney failure ကျောက်ကပ် အလုပ် မလုပ်နိုင် ဖြစ်တယ်။ Dialysis ကျောက်ကပ်ဆေးပေးနေရတာနဲ့ Kidney transplant ကျောက်ကပ်လဲတာ လုပ်ရနိုင်တယ်။
Treatment ဘယ်လိုကုသမလဲ -
ရည်မှန်းချက်က ခံစားနေရတာတွေ သက်သာဘို့နဲ့ နောက်ထပ်ဖြစ်မှာကို တားဘို့ဖြစ်တယ်။ ပျောက်သွားအောင်တော့ မတတ်နိုင်သေးပါ။ ဆောရီး။
• သိပ်မဆိုးသူတွေကို NSAIDs အနာအကိုက်သက်သာဆေးတွေ နဲ့ Corticosteroid creams (စတီရွိုက်) ဆေး နည်းနည်းပေးမယ်။
• ဒါ့အပြင် Antimalaria drug ငှက်ဖျားဆေးကိုလဲ ပေးနိုင်တယ်။ Hydroxychloroquine ဆေးကို ၁၉၅၅ ကတည်းက FDA ကခွင့်ပြုပေးခဲတယ်။ ၂ဝ၁၁ မှာ FDA ကဘဲ Belimumab (Benlysta) ကိုလက်ခံခဲ့တယ်။ ပြန့်လာတာနဲ့ နာတာ သက်သာစေတယ်။
• ဆိုးနေသူတွေကို Corticosteroids (စတီရွိုက်) ဆေး များများပေးမယ်။ ဒီဆေးတွေက ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုးတွေများတာ သတိပြုပါ။ ဆေးကို များများနဲ့ တာရှည်သုံးရရင် Cushing's syndrome ဆိုတာဖြစ်လာတတ်တယ်။ မျက်နှာပြည့်ဝိုင်းမယ်၊ လူလဲဝမယ်၊ ဆီးချိုဖြစ်မယ်၊ အစာလဲ မတရား စားချင်စိတ်ရှိမယ်၊ အိပ်ရေးခက်မယ်၊ အရိုးအားနည်းမယ်။ မျက်စိတိမ်ဖြစ်မှာ သတိထားရအုံးမယ်။
• အနုကြည့်မှန်ဘီလူးနဲ့စစ်လို့ Diffuse proliferative glomerulonephritis တွေ့သူကို Cytotoxic drugs (Cyclophosphamide and Mycophenolate) အပြင်းစားဆေးတွေလဲ ပေးတယ်။
• ဆေးသစ်တွေလဲပေါ်နေပြီ။ Disease-modifying antirheumatic drugs ဆေးတွေကိ်ု ပြန့်လာတာအတွက် သုံးတယ်။ antimalarials (Plaquenil) နဲ့ immunosuppressants (methotrexate and azathioprine) တွေ ဖြစ်ကြတယ်။ Mycophenolic acid ဆေးကို lupus nephritis ကျောက်ကပ်ဖြစ်တာအတွက် သုံးပေမဲ့ FDA က အသိအမှတ်မပြုသေးပါ။
• နာတာ အတော်အသင့်ဆိုးနေရင် Dextropropoxyphene နဲ့ Co-codamol ဘိန်းပါတဲ့ဆေးပေးမယ်။ ပိုနာလွန်းသူတွေကို Hydrocodone နဲ့ Oxycodone, MS Contin, or Methadone ဘိန်းဆေးအပြင်းစားတွေ ပေးရတယ်။
• Fentanyl duragesic transdermal patch ကပ်ခွါဆေးလဲသုံးနိုင်တယ်။ ဘိန်းပါလို့ ကြာရင် ဆေးတိုးတိုးလိုတာ ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဆေးစွဲနိုင်တယ်။
• Intravenous Immunoglobulins သွေးကြောထဲထိုးတဲ့ဆေးကို ကိုယ်အင်္ဂါတွေမှာလာဖြစ်သူတွေအတွက်သုံးတယ်။ Antibody (အင်တီဘော်ဒီ) တွေထုတ်တာကို နှိမ်ဘို့ဖြစ်တယ်။
• နောက်ပေါ်ဆေးတွေ ကောင်းလာလို့ အရင်ကထက်သက်သာလာကြတယ်။ အမျိုးသမီးတွေမှာ သက်သာလို့ ကိုယ်ဝန်လဲ ဆောင်နိုင်လာမယ်။ ကိုယ်ဝန်တိုင်းကတော့ ကောင်းချင်မှ ကောင်းပါမယ်။ Lifestyle changes လူနေမှုပုံစံပြောင်းပါ။
• SLE ဖြစ်မှာကို ကြိုတင်ကာကွယ်လို့ မရနိုင်ပါ။
• နေရောင် ရှောင်ပါ။ မတည့်တဲ့ဆေးတွေ Procainamide, Isoniazid, Hydralazine, Quinidine, Phenytoin ရှောင်ပါ။
• ၁၉၅ဝ ကျောက်ကာလတွေမှာ ဒီရောဂါဖြစ်လာရင် ၅ နှစ်အထိသာ အသက်ရှင်ခဲ့ပေမဲ့ ခုခေတ်မှာ ၉ဝ% ဟာ ၁ဝ နှစ်မက နေနိုင်ကြတယ်။ ၉ဝ% ဟာ သာမန်လူတွေလိုဘဲ ဒေနာမခံစားရဘဲ နေနိုင်ကြတယ်။
• အဖြစ်များတာက မိန်းမတွေဖြစ်ပေမဲ့ ယောက်ျားတွေဖြစ်ရင် အသက်ပိုတိုတယ်။ ကလေးတွေလဲ တိုတယ်။ ဒါပေမဲ့ ခံစားရတာတွေက အသက် ၆ဝ ကျော်မှဖြစ်ရင်တော့ မဆိုးပါ။
• သက်တမ်းတိုတာက အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတွေကို လာဖြစ်မှသာဆိုးတယ်။ နှလုံး-သွေးကြောလမ်းမှာဖြစ်ပြီး သွေးတိုးမယ်၊ (ကိုလက်စထော) များမယ်ဆိုရင် အပြင်းအထံဆေးကုသရမယ်။
• High serum creatinine သွေးထဲ (ခရေယက်တနင်း) များတာ၊ သွေးတိုးတာ၊ Nephrotic syndrome ကျောက်ကပ် ရောင်တာ၊ Anemia သွေးအားနည်းတာနဲ့ Hypoalbuminemia ဆီးအနည်ပါတာတွေ ရှိနေတာက သိပ်မကောင်းတဲ့ လက္ခဏာတွေ ဖြစ်တယ်။
အမျိုးသမီးတွေမှာ ၉ ဆပိုဖြစ်တယ်။ Lady Gaga လေဒီဂါဂါမှာ ဆေးစစ်တော့ ဒီရောဂါ (ဘော်ဒါလိုင်း) ရှိနေတယ်။ သူမက ဘာမှ မခံစားရဘူးပြောတယ်။ သီချင်းတွေဆိုကောင်းတုံးပါ။ သီချင်းဆိုကောင်းသူတွေ ဖြစ်တယ်လို့တော့ ကောက်ချက် မချနိုင်ပါ။ ကွယ်လွန်သူ Michael Jackson မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်မှာ Vitiligo ခရုသင်းအပြင် SLE လဲရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် အပြင်းစား အနာသက်သာဆေးတွေ စွဲခဲ့ပြီး၊ နောက်ဆုံးမေ့ဆေး Propofol (ပရိုပိုဖေါလ်) နဲ့ ကွယ်လွန်သွားရရှာတယ်။
Posted by Dr. Tint Swe at 9:34 AM